ကြက်သားဘာဂါ ( Simple Grilled Chicken Burger ) ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
ကြက်သားဘာဂါ ( Simple Grilled Chicken Burger )
( ၆ ) ခုစာ
ဘာဂါပေါင်မုန်. ( Burger bun ) ..... ၆ လုံး
ကြက်သား( အရေခွံမပါ၊အရိုးမပါ).....၅၀၀ ဂရမ်
ပေါင်မုန်.ကြွပ်ကြေ( bread crumbs ) ၁/၂ ခွက် (လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်)
မှိုပြုတ်ပြီးသား.............................၁ ခွက် (လက်ဖက်ရည်ပန်းကန်လုံး)
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်......................၂ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
Old Bay seasoning powder........ ၂ ဇွန်း
ပါ ( အချို.က အပေါ်မှာနှမ်းလေးတွေနဲ.အလှဆင်ထားတတ်ပါတယ်..။
ကြက်သွန်နီ/ ဖြူ ၊ ပန်းငရုတ်ပွ ၊ မှို စတာတွေကို နုပ်နေအောင်စဉ်းပါ။
ဇလုံတစ်ခုထဲမှာ ကြက်သား၊ နုပ်နုပ်စဉ်းထားတဲ့အသီးအရွက် ၊ ကြက်ဥ ၊
ပေါင်မုန်.ကြွပ်မှုန်. ၊ ပါဝင်တဲ့အရသာတွေကို အားလုံးရောထည့်ပြီး....
၀ိုင်းပြီးပြားထားတဲ့...အသားပြားတွေကို...Grilled Pan လို.ခေါ်တဲ့ ဒယ်ပြား
(သို.) ရိုးရိုး ဒယ်ပြား မှာ ထောပတ်လေးအနည်းငယ်နဲ. ၂ ဖက်လုံး ရွှေညို
ရောင်ရအောင်ကြော်ပါ ( Grilled Pan ဆိုတာ..လိုင်းလေးတွေပါတဲ့အတွက်
Oven (သို.) Microwave ကိုအသုံးပြုပြီး...အသားကျက်အောင်..ထည့်ဖုတ်
ပေးရပါအုံးမယ်...။ ( Oven ဆို ၅ မိနစ် Microwave ဆို ၂ မိနစ်)
Grilled Plate (or ) Grilled Pan မှာအပူပေးထားပါ...။
အပူပေးထားတဲ့ ပေါင်မုန်. သား( ဖြတ်ရာ ) နေရာတွေမှာ မေရိုးနိစ်ဆော့စ်
ဆလတ်ရွက်ကိုအောက်ဆုံးက ခံပေးပါ..။ Oven (သို.) microwave ကထွက်
နောက်ဆုံး..ခရမ်းချဉ်သီးကွင်း ၊ ကြက်သွန်နီကွင်းတွေညှပ်တင်ပြီး..အပေါ်က
အုပ်တင်ရမယ့် မုန်.ကို တည့် (သို.) မိမိအလှဆင်ပြုလုပ်ထားတာကိုစားသုံးသူ
အာလူးအချောင်းကြော်. ဂေါ်ဖီနဲ.ဥနီအမျှင်လေးတွေကို မရိုးနိစ်နဲ.ရောသုပ်
ထားတဲ့ coleslaw ဆိုတာလေးနဲ တွဲဖက်ဧည့်ခံပါ..။